ဦးဖေမြင့် (၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၄၉ မွေးဖွား) သည် မြန်မာ အမျိုးသား စာရေးဆရာတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီးအဖြစ် သမ္မတဦးထင်ကျော်က အဆိုပြုခဲ့ပြီး မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့သည်။
၃၀ မတ် ၂၀၁၆
(1949-12-15) ၁၅ ဒီဇင်ဘာ၊ ၁၉၄၉ (အသက် ၇၀)
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သော စာအုပ်များပြင်ဆင်
↑ Myanmar president to include Aung San Suu Kyi in his Cabinet။[လင့်ခ်သေ]
↑ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး ဦးစီး ဌာန (ရုံးချုပ်) စာတည်း အဖွဲ့ (April 2003). နှစ်ဆယ် ရာစု မြန်မာ စာရေး ဆရာ များနှင့် စာစု စာရင်း. ပညာရွှေတောင် စာအုပ်တိုက်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖေမြင့်&oldid=446172" မှ ရယူရန်
၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၁၆:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။